Trulọ ọrụ aka ụgbọala - China Hand Trucks Manufacturers & Suppliers
Mgbochi nsịpu faịlụ
Kọmpat foldable Aluminium Hand Trọk na telescoping ahụ
HT3366 bụ kọmpat foldable aluminum aka ụgbọala, The n'ozuzu size (H × W × D) bụ 39-1 / 2 "× 15" × 16 ", apịaji size (H × W × D) bụ 25" × 15 "× 2 ", na mkpịsị ụkwụ mkpịsị ụkwụ (W × D) nha bụ 13" × 9 ", ụgbụ ya bụ 9lbs. Enwere ike ịgbanye okpokoro aluminom dị arọ n'ime nha akpa akpa ma nwee ike tinye ya n'okpuru oche ụgbọ ala na ụlọ O nwere ugba telescopic, wiil telescopic, ya na ukwu mkpirisi mkpaghari.
New imewe adaba ọnụ ala ịgbado ọkụ pallet Trolleys n'elu ikpo okwu aka ụgbọala
LV150 bụ aluminom foldable n'elu ikpo okwu aka ụgbọala, The n'ozuzu size (H × W × D) bụ 32-1 / 2 "× 18-1 / 2" × 30 ", na apịaji size bụ 10" × 18-1 / 2 " × 30 ", ụgbụ ya dị iri abụọ na atọ. Nọgide na-ebugharị ngwa ngwa mpịakọta ngwa ngwa iji bugharịa ngwa ngwa na nchekwa. Site na ikike ibu ibu 400 pound, mpịakọta mpịakọta mpịakọta ga-ebugharị katọn n'ọfịs wee wepụ ihe oriri na-adịghị mma ụlọ nkwakọba ihe.
Ogbe shelf Mpempe akwụkwọ nchekwa edo edo Ime ụlọ ime ụlọ Shelf maka ulo Ngalaba Na-ahụ Maka Azụmaahịa Obere Nchekwa Obere